ချဲလ်ဆီးဘောလုံးအသင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
(ချဲလ်ဆီး F.C. မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
The Pensioners, The Blues, "Blue Lion"
၁၀ မတ်လ ၁၉၀၅ခုနှစ်
ချယ်လ်ဆီးဘောလုံးအသင်းသည် လန်ဒန်မြို့ ဖူဟမ်တွင် အခြေစိုက်သည့် အင်္ဂလိပ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးအသင်း ဖြစ်သည်။ ၁၉၀၅ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကလပ်သည် အင်္ဂလိပ်ဘောလုံး၏ထိပ်တန်းပရီးမီးယားလိဂ်တွင် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ ချယ်လ်ဆီးသည် ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား (၆)ခုနှင့် ဥရောပဖလား (၆)ခု အပါအဝင် ဖလား၃၀ကျော် ရရှိခဲ့သည့် အင်္ဂလန်၏အအောင်မြင်ဆုံးကလပ်များထဲမှတစ်သင်းဖြစ်သည်။ အိမ်ကွင်းမှာ စတမ်းဖို့တံတား အားကစားကွင်း ဖြစ်သည်။
ချယ်လ်ဆီးသည် ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးသော အဓိကဂုဏ်ယူစရာ ဖလားဖြစ်သည် လိဂ်ချန်ပီယံဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ ကလပ်သည် ၁၉၇၀ တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် FA ဖလားနှင့် ၁၉၇၁ တွင်ပထမဆုံးဥရောပဖလား UEFA Cup Winners 'Cup တို့ကိုအနိုင်ရခဲ့သည်။ ၁၉၇၀ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်း ကလပ်သည် နိမ့်ကျခဲ့သော်လည်း ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များတွင် ပြန်လည် ရှင်သန်လာခဲ့ပြီး ဖလားပြိုင်ပွဲများတွင် ပိုမိုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုသည် ချယ်လ်ဆီး၏သမိုင်းတွင် အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ဤကာလအတွင်း ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား (၆)ခု အနက် (၅) ခုနှင့်ယူအီးအက်ဖ်အေချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ရရှိခဲ့သည်။ ချယ်လ်ဆီးသည် ယူအီးအက်ဖ်အေ၏အဓိက ကလပ်ပြိုင်ပွဲသုံးခုလုံးကို အနိုင်ရခဲ့သည့်ကလပ်ငါးခုအနက်မှတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ချန်ပီယံလိဂ်အနိုင်ရခဲ့သည့် တစ်ဦးတည်းသော လန်ဒန်ကလပ်လည်း ဖြစ်သည်။
ချယ်လ်ဆီး၏အိမ်ကွင်းဝတ်စုံ အရောင်များမှာ တော်ဝင်အပြာရောင် ရှပ်အင်္ကျီများနှင့်ဘောင်းဘီတိုများဖြစ်ပြီး အဖြူရောင်ခြေအိတ်များကို ဝတ်ဆင်သည်။ ကလပ်၏တံဆိပ်သည် ကျိုင်းတံကို ကိုင်ဆောင်ထားသည့်အခမ်းအနားကျင်းပသည့်ခြင်္သေ့ဖြစ်သည်။ မြို့ခံပြိုင်ဘက်များ ဖြစ်သည့်အာဆင်နယ်နှင့်စပါးအသင်းတို့အပြင် လိဒ်ယူနိုက်တက်အသင်းတို့ဖြင့် အမြဲတမ်း အကြိုက်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်ကစားလေ့ရှိသည်။ တက်ရောက်သူကိန်းဂဏန်းများအရ ကလပ်သည် အင်္ဂလန်တွင် ဆဌမ အကြီးဆုံးပရိတ်သတ်များ ရှိသည်။ ကလပ်တန်ဖိုး၏စည်းကမ်းချက်များအရ ချယ်လ်ဆီးသည် ပေါင် ၂.၁၃ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၂.၅၇၆ ဘီလီယံ) တန်ဖိုးရှိကမ္ဘာ့ ဆဌမ အဖိုးတန်ဆုံးဘောလုံးအသင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇-၁၈ရာသီတွင် ယူရို ၄၂၈ သန်းကျော် ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစ၍ ချယ်လ်ဆီးကို ရုရှား ဘီလျံနာ ရိုမန် အေဘရာမိုဗစ်ချ် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။
၁ အသင်း သမိုင်း
၂ ပထမ အသင်းလူစာရင်း
၂.၁ အငှားချထားသည့် ကစားသမားများ
၂.၂ စာချုပ်ချုပ်ထားပြီး အခြားကစားသမားများ
၃ ချဲလ်ဆီးအမျိုးသမီး ဘောလုံးအသင်း
၄ တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံးကစားသမားများ
၅ ထင်ရှားသော မန်နေဂျာများ
၆ အုပ်ချုပ်ရေး အသင်း
၁၉၀၅ စက်တင်ဘာလတွင် ပထမဆုံး ချဲလ်ဆီးအသင်း
၁၉၀၄ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်လူမျိုး စီးပွားရေးသမား ဂက်စ် မီးရားစ်သည် စတမ်းဖို့တံတား အားကစားကွင်းကိုဘောလုံးကွင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ အနီးအနားရှိ ဖူဟမ်သို့ငှားရမ်းရန်ကမ်းလှမ်းမှုကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး မီးရားစ်သည် အားကစားကွင်းကိုအသုံးပြုရန် သူ၏ကိုယ်ပိုင်ကလပ်ထူထောင်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဒေသတွင်းတွင် ဖူဟမ် အမည်ရှိအသင်းတစ်သင်းရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် ချယ်လ်ဆီးအမည်ကို ကလပ်အသစ်အတွက် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ Kensington FC၊ Stamford Bridge FC နှင့် London FC စသည့်နာမည်များကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်။ ချယ်လ်ဆီးကို ၁၉၀၅ မတ်လ ၁၀ ရက်တွင် ဖူဟမ်လမ်းမပေါ် ကွင်းထဲသို့သွားသောအဓိကဝင်ပေါက်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော Rising Sun အရက်ဆိုင်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် မကြာမီတွင် ဘောလုံးလိဂ်တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
၁၉၀၆မှ ယနေ့အထိ ချဲလ်ဆီး၏လိဂ်အတွင်း ရပ်တည်မှုပြ ဇယား
ချယ်လ်ဆီးသည် ဒုတိယရာသီတွင် ပထမတန်းသို့ တိုးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။ အစောပိုင်းနှစ်များတွင် ပထမတန်းနှင့် ဒုတိယတန်းတို့တွင် တက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ၁၉၁၅ ခုနှစ် FA ဖလားဗိုလ်လုပွဲသို့ရောက်ခဲ့ကြပြီး အိုးထရက်ဖို့ကွင်းတွင် ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်အား ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြပြီး ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်ပထမတန်းတွင် တတိယနေရာရရှိခဲ့သည်။ ချယ်လ်ဆီးသည်ကြယ်ပွင့်ကစားသမားများ ရယူရာ၌နာမည်ကြီးခဲ့ပြီး ဘောလုံးပရိတ်သတ်များစွာကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၂၀ နှင့် ၁၉၃၂ ခုနှစ်တွင် အက်ဖ်အေဖလား၏ဆီမီးဖိုင်နယ်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့သည့်အသင်းများဖြစ်ကြပြီး ၁၉၃၀ နှစ်များတစ်လျှောက် ပထမတန်းတွင် ဆက်လက်ရှိနေသော်လည်း စစ်ပွဲများကြားတွင် ကလပ်သည်အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပေ။
ယခင် အာဆင်နယ်နှင့်အင်္ဂလန်အသင်း၏ရှေ့တန်းကစားသမား တက်ဒရိတ်အား ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် မန်နေဂျာအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။ သူသည် အသင်းကို လူငယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းပြီး လေ့ကျင့်မှုစနစ်ကို တိုးတက်စေခဲ့သည်။ အောက်တန်းနှင့်အပျော်တမ်းလိဂ်များမှလိမ္မာပါးနပ်သောလက်မှတ်ထိုးမှုများဖြင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၄-၅၅ခုနှစ်တွင် ချဲလ်ဆီးအသင်း၏ပထမဆုံးဆုကြီးအဖြစ် လိဂ်ချန်ပီယံဆုရရှိအောင် ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ နောက်ရာသီတွင် UEFA သည် ဥရောပချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို စတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဘောလုံးလိဂ်နှင့်အက်ဖ်အေမှကန့်ကွက်မှုများအပြီး ချယ်လ်ဆီးသည် မစတင်မှီပြိုင်ပွဲမှ နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ ချယ်လ်ဆီးသည် ဤအောင်မြင်မှုကို မတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ဘဲ ကျန်ရှိနေသေးသော ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်း ဇယားအလယ်၌နေခဲ့ရသည်။ ဒရိတ်ကို ၁၉၆၁ တွင်ထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီး ကစားသမားနည်းပြ တမ်မီ ဒိုချာတီဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။
1 GK ကီပါအာရီဇာဘလာဂါ
2 DF အန်တိုနီယို ရူဒီဂါ
3 DF မားကို့စ် အလွန်ဆို
4 DF အန်ဒရေ ခရစ်စတန်ဆန်
5 MF ဂျော်ဂျင်ဟို
6 DF သီရာဂို ဆေးလ်ဗား
7 MF ကန်တီ
9 FW တမ်မီ အေဘရာဟမ်
10 MF ပူလီဆစ်
11 FW တီမို ဗာနာ
12 MF ရူဘင် လော့ဖ်တပ်ချိ
13 GK ဝီလီ ကာဘာလီယို
14 DF ဖီကာရို တိုမိုရီ
15 DF ကတ်ဇူးမား
16 GK မန်ဒီ
17 MF ကိုဗာဆစ်
18 FW အိုလီဘာ ဂီးရောဒ်
19 MF မေဆွန်မောင့်
20 FW ကယ်လမ် ဟတ်ဆန်အိုဒွိုင်း
21 DF ဘန် ချေဝဲလ်
22 MF ဟာကင် ဇီးရက်စ်
23 MF ဘီလီ ဂေးမော
24 MF ရီစီ ဂျိမ်းစ်
28 DF အက်ဇ်ပီလီကွဲတား (အသင်းခေါင်းဆောင်)
29 MF ကိုင် ဟာဗာဇ်
33 DF အီမာဆင် ပါမီရီ
GK Jamal Blackman (to Rotherham United until 31 May 2021)
GK Jamie Cumming (to Stevenage until 31 May 2021)
GK Teddy Sharman-Lowe (to Burton Albion until 31 May 2021)
DF Ethan Ampadu (to Sheffield United until 30 June 2021)
DF Trevoh Chalobah (to Lorient until 30 June 2021)
DF Marc Guehi (to Swansea City until 31 May 2021)
MF Danilo Pantić (to Čukarički until 30 June 2021)
MF Tariq Uwakwe (to Accrington Stanley until 31 May 2021)
FW Kenedy (to Granada until 30 June 2021)
FW Lucas Piazon (to Rio Ave until 30 June 2021)
FW Armando Broja (to Vitesse until 30 June 2021)
FW Charlie Brown (to Union SG until 30 June 2021)
FW Izzy Brown (to Sheffield Wednesday until 31 May 2021)
FW Ike Ugbo (to Cercle Brugge until 30 June 2021)
FW Michy Batshuayi (to Crystal Palace until 30 June 2021)
MF Ross Barkley (to Aston Villa until 30 June 2021)
— DF Malang Sarr
— MF Victor Moses
— FW Charly Musonda
ချဲလ်ဆီးသည်ယခင်ကချဲလ်ဆီး လေဒီများ ဟုလူသိများသည့်အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်း၊ ချဲလ်ဆီးအမျိုးသမီး ဘောလုံးအသင်းကိုလည်း ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၄င်းတို့သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစ၍ အမျိုးသားအသင်းနှင့်တွဲဖက်ခဲ့ပြီး ကလပ်အသင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တွင်းကစားပွဲများကို Kingsmeadowရှိ EFL League One ကလပ် AFC ဝင်ဘယ်ဒန် ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာကစားသည်။ ကလပ်ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် တောင်ပိုင်းတိုင်းချန်ပီယံများဖြစ်ပြီးနောက် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပရီးမီးယားလိဂ်သို့ တိုးမြှင့်ခြင်းခံရပြီး ၂၀၀၃ မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း Surrey ကောင်တီဖလား ကိုးကြိမ် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ချဲလ်ဆီးအသင်းသည် အဖ်အေ အမျိုးသမီးစူပါလိဂ်ကို တည်ထောင်သူရှစ်ယောက်ထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ချဲလ်ဆီးအသင်းသည် FA ဖလားအမျိုးသမီး FA ဖလားကို ဝင်ဘေလေ အားကစားကွင်း၌ နော့ထ်ကောင်တီအမျိုးသမီးများအား အနိုင်ကစားပြီး ပထမဆုံးဖလားရခဲ့သည်။ နှင့်တစ်လအကြာတွင်၎င်းတို့၏ပထမ FA WSL ကိုအနိုင်ရခဲ့ပြီးပရီးမီးယားလိဂ်နှင့် FA ဖလား နှစ်ခု ရခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် သူတို့သည် ဒုတိယ လိဂ်နှင့်အက်ဖ်အေဖလား နှစ်လုံးရရှိခဲ့သည်။ နှစ်နှစ်အကြာ ၂၀၂၀ တွင်သူတို့သည် တတိယမြောက် လိဂ်ဖလားနှင့်လိဂ်ဖလားကို ပထမဆုံးအကြိမ်အနိုင်ရရှိခြင်းဖြင့်သူတို့၏နှစ်ဆအောင်မြင်မှုကို ထပ်မံရရှိခဲ့သည်။ ချဲလ်ဆီးအမျိုးသားအသင်း၏ကပ္ပတိန်ဟောင်းဂျွန်တယ်ရီသည်ချဲလ်ဆီးအမျိုးသမီးများ၏ဥက္ကဌဖြစ်သည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - List of Chelsea F.C. players
1967 ပီတာ ဘိုနက်တီ
1968 ချာလီ ကူကီ
1969 ဒေးဗစ် ဝဘ်
1970 ဂျွန် ဟိုလင်
1971 ဂျွန် ဟိုလင်
1972 ဒေးဗစ် ဝဘ်
1973 ပီတာ အို့စ်ဂွတ်
1974 ဂါရီ လော့ခ်
1975 ချာလီ ကူကီ
1976 ရေး ဝီလ်ကင်
1977 ရေး ဝီလ်ကင်
1978 မစ်ကီ ဒရိုင်း
1979 တွမ်မီ လန်ဂလီ
1980 ကလိုက် ဝေါ်လ်ကာ
1981 ပီတာ ဘိုရာတာ
1982 မိုက် ဖေလာရီ
1983 ဂျိုဝီ ဂျုံးစ်
1984 ပက် နီဗင်
1985 ဒေးဗစ် စပီးဒီ
1986 အက်ဒီ နိုင်ဝစ်ကီ
1987 ပက် နီဗင်
1988 တိုနီ ဒိုရီဂို
1989 ဂရေဟန် ရိုဘတ်စ်
1990 ကန် မွန်ကူ
1991 အန်ဒီ တောင်စန်
1992 ပေါ အီလီဝေါ့
1993 ဖရန့် စင်ကလဲ
1994 စတီဖ် ကလာ့
1995 အာလန် ဂျွန်ဆန်
1996 ရုဒ် ဂူးလဒ်
1997 မာ့က် ဟူးချ်
1998 ဒန်းနစ် ဝိုက်စ်
1999 ဂီရန်ဖရန်ကို ဇိုလာ
2000 ဒန်းနစ် ဝိုက်စ်
2001 ဂျွန် တယ်ရီ
2002 ကာလို ကူစီဒီနီ
2003 ဂီရန်ဖရန်ကို ဇိုလာ
2004 ဖရန့် လမ်းပတ်
2005 ဖရန့် လမ်းပတ်
2006 ဂျွန် တယ်ရီ
2007 မိုက်ကယ် အက်စီရန်
2009 ဖရန့် လမ်းပတ်
2010 ဒီဒီရာ ဒရောဘာ
2011 ပီတာ ချက်
2012 ဂျူရန် မာတာ
2013 ဂျူရန် မာတာ
2014 အီဒင် ဟာဇက်
2015 အီဒင် ဟာဇက်
2017 အီဒင် ဟာဇက်
2018 အန်ဂိုလို ကန်တီ
2019 အီဒင် ဟာဇက်
2020 မာတီအို ကိုဗာဆစ်
အောက်ပါမန်နေဂျာများသည် ချဲလ်ဆီးအသင်းကို ကိုင်တွယ်နေချိန်အတွင်း အနည်းဆုံးဖလားတစ်လုံး ရယူခဲ့သူများဖြစ်သည်။
တက် ဒရိတ် 1952–1961 First Division Championship, Charity Shield
တွန်မီ ဒိုချာတီ 1962–1967 League Cup
ဒေ့ ဆက်တန် 1967–1974 FA Cup, UEFA Cup Winners' Cup
ဂျွန် နီးလ် 1981–1985 Second Division Championship
ဂျွန် ဟိုလင် 1985–1988 Full Members Cup
ဘော့ဘီ ကမ်းဘလ် 1988–1991 Second Division Championship, Full Members Cup
ရုဒ် ဂူးလဒ် 1996–1998 FA Cup
ဂျီရန်လူကာ ဗီရာလီ 1998–2000 FA Cup, League Cup, Charity Shield, UEFA Cup Winners' Cup, UEFA Super Cup
ဟိုဆေး မိုရင်ဟို 2004–2007
ဂူးစ် ဟစ်ဒင် 2009
2015–2016[nb ၁] FA Cup
ကာလို အန်ဆယ်လိုတီ 2009–2011 Premier League, FA Cup, Community Shield
ရိုဘက်တို ဒီ မက်တီရို 2012[nb ၂] FA Cup, UEFA Champions League
ရာဖာအလ် ဘန်နီတက်စ် 2012–2013[nb ၃] UEFA Europa League
အန်တိုနီရို ကွန်တီ 2016–2018 Premier League, FA Cup
မော်ရီဇီအို ဆာရီ 2018–2019 UEFA Europa League
ယခင် ကစားသမား ဖရန့် လမ်းပတ်သည် လက်ရှိ ချဲလ်ဆီးနည်းပြချုပ်ဖြစ်သည်။
နည်းပြချုပ် ဖရန့် လမ်းပတ်
ဒု နည်းပြချုပ် ဂျိုဒီ မော်ရစ်
လက်ထောက်နည်းပြများ ဂျိုး အဒ်ဝဒ်
ဂိုးနည်းပြများ ဟိန်းရစ် ဟီလာရီရို
ကြံ့ခိုင်မှု နည်းပြများ မက် ဘာနီး
နည်းစနစ်နှင့်စွမ်းဆောင်မှု အကြံပေး ပီတာ ချက်
ဆေးဘက် ညွှန်မှုး ပါကို ဘီအိုစ်ကာ
အငှား နည်းစနစ် နည်းပြများ ကာလို ကူစီဒီနီ
အငှား ဂိုးနည်းပြ ခရစ်တိုဖာ လိုလီချွန်
နိုင်ငံတကာ ကင်းထောက်ချုပ် Scott McLachlan
နည်းစနစ် ဆရာ ကလော့ဒ် မက်ကီလီလီ
လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ခေါင်းဆောင် နီးလ် ဘက်
ဖွံ့ဖြိုးရေး အသင်းမန်နေဂျာ အန်ဒီ မိုင်ရာစ်
၁၈နှစ်အောက်အသင်း မန်နေဂျာ အဒ် ဘရန်
ဖရန့် လမ်းပတ် အသင်းသက်တမ်း တလျောက် ဂိုးအများဆုံးသွင်းယူသူ
ချယ်လ်ဆီး၏အများဆုံးပါဝင်ကစားသူမှာ ကပ္ပတိန်ဟောင်း ရွန်ဟာရစ်ဖြစ်ပြီး ၁၉၆၁ မှ ၁၉၈၀ အတွင်း ကလပ်အသင်းအတွက် ၇၉၅ ပွဲ ကစားခဲ့သည်။  အခြားကစားသမား လေးဦးသည် ကလပ်အတွက် ပွဲပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ကစားခဲ့သည် - ပီတာဘိုနက်တီ (၇၂၉၊ ၁၉၅၉-၇၉)၊ ဂျွန်တယ်ရီ (၇၁၇၊ ၁၉၉၈-၂၀၁၇)၊ ဖရန့်လမ်းပတ်(၆၄၈၊ ၂၀၀၁-၂၀၁၄) နှင့် ဂျွန်ဟိုလင် (၅၉၂၊ ၁၉၆၃-၁၉၇၅နှင့် ၁၉၈၃-၁၉၈၄) ။ အင်္ဂလန်အသင်းအတွက် ၁၀၃ ပွဲ (ကလပ်တွင်ရှိနေစဉ် ၁၀၁ပွဲ) ဖြင့် ဖရန့်လမ်းပတ်သည် ချယ်လ်ဆီးအသင်း၏နိုင်ငံပွဲအများဆုံးကစားသမားဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃-၁၄ ဘောလုံးရာသီ၏ တစ်ရာသီအတွင်း ၅၇ ပွဲ ကစားခဲ့ခြင်းသည် ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှစတင်ခဲ့သည့်ကစားသမားတိုင်းအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ - ကလပ်စံချိန်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ဇန်နဝါရီလတွင် ဖာနန်ဒိုတောရက်စ်ကို ပေါင်သန်း ၅၀ ဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ဗြိတိန်စံချိန်ချိုးခဲ့သည်။ ထိုစံချိန် ၂၀၁၄ခုထိ တည်ခဲ့သည်
လမ်းပတ်သည် (၆၄၈) ပွဲတွင် (၂၁၁ ဂိုး) သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချယ်လ်ဆီး၏အများဆုံးဂိုးသွင်းသူဖြစ်သည်။ (၂၀၀၁-၂၀၁၄)၊ သူသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မေလတွင် ဘော့ဘီတမ်ဘလင်း၏နှစ်ပေါင်း ၂၀၂ ကြာစံချိန်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။ အခြားကစားသမားရှစ်ယောက်သည် ချယ်လ်ဆီးအတွက် ဂိုးပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ဂိုး သွင်းယူခဲ့သည်။ ဂျော့ဂ်ျဟယ်လ်ဒန် (၁၉၀၆-၁၉၁၂)၊ ဂျော့ခ်ျ မေးလ် (၁၉၂၉-၁၉၃၉)၊ ရိုင်းဘန်တလီ(၁၉၄၈-၁၉၅၆) ပီတာအော့စ်ဂွဒ်(၁၉၆၄-၁၉၇၄ နှင့် ၁၉၇၈-၁၉၇၉), ကယ်ရီ ဒစ်ဇင် (၁၉၈၃-၁၉၉၂), ဒီဒီရာ ဒရောဘာ (၂၀၀၄-၂၀၁၂ နှင့် ၂၀၁၄-၂၀၁၅) နှင့်အေဒင် ဟာဇက် (၂၀၁၂-၂၀၁၉) ။ ဂရီးစ်သည် တစ်ရာသီအတွင်း ဂိုးအများဆုံး သွင်းယူနိုင်မှုအတွက်(၁၉၆၀-၆၁ တွင် ၄၃ဂိုး) စံချိန်ကို ရရှိခဲ့သည်။ ချယ်လ်ဆီးကစားသမားတစ်ဦး အနေဖြင့် ဂရီးစ်သည် အသက် နှစ် ၂၀ နှင့်ရက်ပေါင်း ၂၉၀ တွင်အင်္ဂလိပ်ထိပ်တန်းအဆင့်မြင့်တန်းတွင် ဂိုးပေါင်း ၁၀၀ သွင်းယူနိုင်သည့် အငယ်ဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့သည်။
ချယ်လ်ဆီး၏သွင်းဂိုးအများဆုံးနိုင်သည့်ပွဲမှာ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် Cup Winners' Cup ရှုံးထွက်ဖလားပွဲတွင် ဂျွန်နက်ဟော့ချာရေ့ကို ၁၃-၀ ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့သည်။ ကလပ်၏အကြီးကျယ်ဆုံးထိပ်တန်းအနိုင်ရမှုမှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ဝီဂန် အက်သလက်တစ် ကို ၈-၀ ဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ တွင် Aston Villa နှင့်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ချယ်လ်ဆီး၏အကြီးမားဆုံးအရှုံးမှာ ၁၉၅၃ တွင် Wolverhampton Wanderers နှင့် ၈-၁ ဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကလပ်၏ ၁၉၁၁ ခုနှစ်တွင်ယူအီးအက်ဖ်အေCup Winners' Cup ရှုံးထွက်ဖလားပွဲတွင် Jeunesse Hautcharage ကို ၂၁-၀ စုစုပေါင်းအနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းသည် ဥရောပပြိုင်ဆိုင်မှုတွင် စံချိန်တင်ထားသည်။  ၁၉၁၅ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်တွင် အာဆင်နယ်အသင်းနှင့်ပထမတန်းပွဲစဉ်အတွက် တရားဝင် ချယ်လ်ဆီး၏အိမ်တွင်းအမြင့်ဆုံးတက်ရောက်မှုမှာ ၈၂,၉၀၅ ဖြစ်သည်။ သို့သော်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် လူဦးရေ ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်သည် ၁၉၄၅၊ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင်ဆိုဗီယက်အသင်း ဒင်းနမိုမော်စကိုနှင့်ချစ်ကြည်ရေးပွဲတွင် တက်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။
ချဲလ်ဆီးအသင်းသည် ၂၀၀၄-၀၅ရာသီတွင် တစ်ရာသီအတွင်း အမှတ်အများဆုံး (၉၅မှတ်)၊ ပေးဂိုးအနည်းဆုံး (၁၅ဂိုး)၊ ပေးဂိုးမရှိပွဲ အများဆုံး (၂၅ပွဲ) ရှိရခဲ့ပြီး အင်္ဂလန်စံချိန်များ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ရာသီတွင် အမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲတွင် နိုင်ပွဲ ၃၀ပွဲ ရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၀၅-၂၀၀၆ ရာသီ စတင်သည့် ပွဲ ၆ပွဲဆက်တိုက် ပေးဂိုးမရှိသည့် စံချိန်များကို လည်း ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ချဲလ်ဆီးသည်, အာဆင်နယ်အသင်းနှင့်အတူ, ဆွမ်ဆီးမြို့အသင်းနှင့် ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆုံး အင်္ကျီကျောနံပါတ်များ တပ်ဆင်ပြီး ၂၅ ဩဂုတ်လ ၁၉၂၈နေ့ပွဲတွင် စတင် ဝတ်ဆင်ကစားခဲ့သည့် အသင်းဖြစ်သည်။ ၁၉ ဧပြီလ ၁၉၅၇ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်သော နယူးကာဆယ်အသင်းနှင့် ပြိုင်သော ပြည်တွင်း အဝေးကွင်းပွဲစဉ်သို့ လေယာဉ်ဖြင့် သွားခဲ့သည့် ပထမဆုံး အင်္ဂလိပ်အသင်းလည်းဖြစ်သည်။ ၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၉၉ခုနှစ်တွင် ကျင်းပသော ပြည်တွင်းအမှတ်ပေးပွဲ ဆောက်သမ်တန်အသင်းနှင့် ပြိုင်ပွဲတွင် ပွဲထွက် ၁၁ဦး လူစာရင်းတွင် (အင်္ဂလိပ် / အိုင်းရှစ်လူမျိုး တစ်ဦးမှ မပါဘဲ) အားလုံးနိုင်ငံခြားသားများဖြင့်ကစားခဲ့သည့် ပထမဆုံး အင်္ဂလန်အသင်းဖြစ်သည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်မတ်လ ၂၀ ရက်မှ ၂၀၀၈ အောက်တိုဘာ ၂၆ အထိ ချယ်လ်ဆီးသည် အိမ်ကွင်းတွင် စံချိန် ၈၆ ပွဲ ဆက်တိုက် အရှုံးမရှိလိဂ်ပွဲများ ကစားနိုင်ခဲ့ပြီး လီဗာပူးလ်အသင်းက ၁၉၇၈ မှ ၁၉၈၀ အကြားတွင် ၆၃ ပွဲဖြင့်နိုင်ခဲ့သည့် စံချိန်ကို ချိုးခဲ့သည်။ ချယ်လ်ဆီးသည် ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီတွင်း သွင်းဂိုးမပေးရသည့်ပွဲ (အများဆုံး) (၂၅ ပွဲ) ၊လိဂ်တစ်ရာသီအတွင်း ဂိုးအနည်းဆုံးသွင်းခံရမှု ဂိုး(၁၅) များဖြင့်အင်္ဂလိပ်စံချိန်ကိုရရှိထားသည်(နှစ်ခုလုံး ၂၀၀၄-၀၅ ရာသီတွင် ရခဲ့သည်)။ ထို့အပြင် ၂၀၀၅-၀၆ရာသီအစတွင် သွင်းဂိုးမပေးရသည့်ပွဲ (၆ပွဲ) စံချိန်တင်ခဲ့သည်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဧပြီလ ၅ ရက်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်အကြား၌ တစ်ဆက်တိုက်အဝေးကွင်းပရီးမီးယားလိဂ်အနိုင်များ(၁၁)ပွဲကို ရရှိခဲ့သည်။ ချယ်လ်ဆီးသည် ၂၀၀၅-၀၆ ရာသီတွင် ပရီးမီးယားလိဂ် ရာသီအစကိုးပွဲဆက် နိုင်ခဲ့သည့် တစ်ခုတည်းသောအသင်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉ မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ ချယ်လ်ဆီးသည် အက်ဖ်အေဖလားပြိုင်ပွဲ ၂၉ ခုဆက်တိုက် (ပင်နယ်တီကန်မှုမှ လွဲ၍) အရှုံးမရှိ ဆက်တိုက်နိုင်သည့် စံချိန်တင်ခဲ့သည်။
ချယ်လ်ဆီးသည် ၂ကြိမ်တိုင် ဗြိတိန်ကလပ်တစ်သင်းသို့ အမြင့်ဆုံးပြောင်းရွှေ့ကြေးအတွက် စံချိန်တင် ချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် အေစီမီလန် မှ အန်ဒရီ ရှက်ချန်ကိုကို သူတို့၏ပေါင် ၃၀.၈ သန်းဝယ်ယူမှုသည် ဗြိတိသျှစံချိန်တင်ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ စက်တင်ဘာလတွင်မှ ရော်ဘင်ဟို အတွက် မန်ချက်စတာစီးတီးမှပေးခဲ့သောပေါင် ၃၂.၅ သန်းက သာလွန်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် လီဗာပူးလ်မှဖာနန်ဒိုတောရက်စ်ကို ပေါင်သန်း ၅၀ ဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့သည့် စံချိန်မှာ ၂၀၁၄ သြဂုတ်လတွင် အန်ဂျယ်ဒီမာရီယာအား ပေါင် ၅၉.၇ သန်းဖြင့် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သို့ လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်အချိန်အထိ စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင်ကလပ်၏ပေါင် ၇၁ သန်းကို ကီပါအာရီဇာဘလာဂါKepa Arrizabalaga ကို ၀ယ်ယူခဲ့သည်မှာဂိုးသမားတစ်ဦး အတွကကမ္ဘာ့စံချိန်ဖြစ်သည်။
အမှတ်ပေးချန်ပီယံ − (၆) ကြိမ် (၁၉၅၄-၅၅၊ ၂၀၀၄-၀၅၊ ၂၀၀၅-၀၆၊ ၂၀၀၉-၁၀၊ ၂၀၁၄-၁၅၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇)
အက်ဖ်အေ ဖလားချန်ပီယံ − (၇) ကြိမ် (၁၉၇၀၊ ၁၉၉၇၊ ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၂)
ကားလင်းဖလား − (၄) ကြိမ် (၁၉၆၅၊ ၁၉၉၈၊ ၂၀၀၅၊ ၂၀၀၇)
ကွန်မြူနတီဒိုင်းချန်ပီယံ − (၄) ကြိမ် (၁၉၅၅၊ ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၅၊ ၂၀၀၉)
ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား − (၂) ကြိမ် − (၂၀၁၂၊၂၀၂၁)
ဥရောပရှုံးထွက်ဖလား − (၂) ကြိမ် (၁၉၇၁၊ ၁၉၉၈)
ဥရောပစူပါဖလား − (၁) ကြိမ် (၁၉၉၈)
ယူရိုပါလိဂ်ဖလား- (၂) ကြိမ် (၂၀၁၃၊ ၂၀၁၉)
↑ Premier League Handbook Season 2015/16 (PDF)။ Premier League။ 23 May 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ General Club Information။ Chelsea FC။
↑ Trophy Cabinet။ Chelsea FC။
↑ "Chelsea centenary crest unveiled"၊ BBC Sport၊ 12 November 2004။
↑ All Time League Attendance Records။ nufc.com (22 September 2015)။6April 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2September 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Please note, pre-war figures come from unreliable sources.
↑ Ozanian၊ Mike။ "The World's Most Valuable Soccer Teams 2018"၊ Forbes။
↑ Deloitte Football Money League 2018။ Deloitte (23 January 2018)။
↑ "Russian businessman buys Chelsea"၊ BBC Sport၊2July 2003။
↑ The Birth ofaClub။ Chelsea FC (30 September 2004)။
↑ Glanville၊ Brian။ "Little sign of change for Chelsea and their impossible dreams"၊ The Times၊ 10 January 2004။ (စာရင်းသွင်းရန် လိုအပ်သည်)
↑ Glanville၊ Brian။ "The great Chelsea surrender"၊ The Times၊ 27 April 2005။
↑ Teams: Men။ Chelsea F.C.။
↑ Lampard adds coach to his backroom staff။ Chelsea F.C. (25 August 2020)။
↑ Petr Cech appointed Technical and Performance Advisor။ Chelsea F.C. (21 June 2019)။
↑ Carlo Cudicini takes on role coaching Chelsea loan players။ Chelsea F.C. (2 August 2019)။
↑ Claude Makelele returns to Chelsea inanew coaching role။ Chelsea F.C. (2 August 2019)။
↑ For the appearance and goalscoring records of all Chelsea players, see Glanvill၊ Rick (2006)။ Chelsea FC: The Official Biography။ pp. 399–410။
↑ Pre-Match Briefing: Burnley v Chelsea – part one။ Chelsea FC။
↑ "Chelsea's Frank Lampard given golden boot by Bobby Tambling"၊ BBC၊ 19 May 2013။
↑ Chelsea Legends။ Chelsea News (17 February 2009)။
↑ Jimmy Greaves။ chelseafc.com။
↑ Words on Winning: 21–0။ Chelsea FC။
↑ Chelsea v Wigan match report။ Chelsea FC။
↑ Chelsea FC။ Union of European Football Associations။
↑ Dutton၊ Paul။ Ask Statsman 37။ Chelsea FC။
↑ Cup Winners' Cup Trivia။ Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation။
↑ Team History – 1940s။ Chelsea FC။
↑ Viner၊ Brian။ "Brian Viner: Diamond days of side who brought touch of glamour to post-war Britain"၊ The Independent၊ Independent Print Limited၊ 29 October 2005။
↑ "Chelsea 3–2 Birmingham"၊ BBC Sport၊ 12 August 2007။
↑ "Chelsea 0–1 Liverpool"၊ BBC Sport၊ 26 October 2008။
↑ "Mourinho proud of battling finish"၊ BBC Sport၊ 13 May 2005။
↑ "Charlton 0–2 Chelsea"၊ BBC Sport၊ 17 September 2005။
↑ "Chelsea in eleven heaven"၊ Premier League၊ 8 December 2008။
↑ Diamond၊ Harry။ "Six best ever starts toaPremier League season"၊ The Football Faithful၊ 19 September 2019။
↑ "Premier League stats: Manchester United end Liverpool's winning run"၊ BBC၊ 21 October 2019။
↑ "Chelsea 1-0 Man Utd"၊ BBC၊ 1 April 2013။
↑ "Chelsea land Shevchenko with £30.8m record deal"၊ The Independent၊ 1 June 2006။
↑ "Man City beat Chelsea to Robinho"၊ BBC၊5January 2012။
↑ Transfer news: Manchester United sign Angel di Maria from Real Madrid။
↑ "Kepa Arrizabalaga: Chelsea sign Athletic Bilbao goalkeeper in world record deal"၊ BBC၊9August 2018။
ကိုးကား အမှား - <ref> tags exist foragroup named "nb", but no corresponding <references group="nb"/> tag was found
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ချဲလ်ဆီးဘောလုံးအသင်း&oldid=659949" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဇွန် ၂၀၂၁၊ ၀၀:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။